Liam-baovao ny Malagasy – i am a malagasy in genève
19 octobre 2007 15 mars 2010
Liam-baovao ny Malagasy
Andro vao maraina, teo anoloan’ny mpivarotra eta-madinika, tany amin’ny renivohi-paritany Fianarantsoa no nakako io sary io.
Lehilahy eo amin’ny folo eo ho eo, mifanety miezaka mamaky ireo matoan-dahatsoratra sy ampaha-lahatsoratra amin’ny pejy voalohan’ireto gazety 12 mipaingotra eto amin’ity tolàna amin’ny alàlan’ny tady sy ny « pince » fanelezan-damba.
Mba nanatona teo koa ho namaky dia akory ny hagagako fa gazety niseho omaly tany Antananarivo io amidy any Fianarantsoa io. Izany hoe satria misy fahita-lavitra mampita ny vaovao an-tsary frantsay any dia angamba mahalala kokoa izay zava-mitranga any Frantsa noho izay miseho any Madagasikara ny olona. Dia tsaroako fa indraindray aho rehefa alim-patory any Soisa dia mahita amin’ny aterineto dieny misasa-kalina izay vaovao hitranga ny ampitson’iny,
Mba nijery vaovaon’ireo fahitalavitra Malagasy ihany koa aho dia gaga fa tsy samihafa mihitsy tamin’ny andron’ny fitondrana taloha. Raha tsy ny loko mena izay nivadika ho manga sy maitso sy ny tsy fisian’ny « OE, OE ! » sy ny « MOA TSY IZANY VA ? » intsony 😉 Nilaza ny olona fa izaho no « ratsy » fahatongavana satria ankatoky ny fifidianana, fa raha ny andavan’andro dia tena hita tokoa ny faha-samihafana … na dia ny fisian’ireo fahitalavitra maro aza fa tsy « feo tokana » dia ny an’ny RTM/RNM toy ny taloha fotsiny.
Mino izay nambaran’izy ireo aho anefa dia tsy nanatrika vaovao an-tsary intsony indrindra raha nahatsiaro ireo trano maro may tany amin’ny faritry Marolambo tamin’ny taon-dasa nifanindry indrindra tamin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ho filoham-pirenena >> aho dia sarotra amiko ny mino fa ireo kabary sy prôpagandy samihafa ireo no hany « vaovao ».
Marihiko eto fa ireo fampahalalam-baovaom-pirenena RNM/RTM ihany no voafehin’ny làlàna hanome fe-pototana anjara fitenenana mitovy hoan’ireo antoko milatsaka samihafa [temps de parole identique aux partis]. Izany hoe mahazo tombony lavitra ireo antoko izay manana avara-patana amina foibe-na fahitalavitra, na radio, na gazety. Mazava ho azy fa raha manana azy telo indray miaraka dia tsy lazaina intsony 😉
Efa miresaka prôpagandy ihany isika, isak’izay tanan-dehibe nolalovako dia nahagaga ahy ny nahita ireto fiara miravaka peta-drindrina maro sy mandefa mozika mafy ary mirimorimo manavatsava ny tanàna. Nambaran’izay olona nanontaniako fa mpanao prôpagandy ireny, na dia tsy nisy fotoana hamakiana izay soratra akory aza. Izany hoe tsy misy hevitra mba atolotra, tsy misy praograma, fa ny loko sy ny laharan’ny lisitra ihany no asehoseho hotsarovan’ny mpifidy. Anakampo aho no miteny irery hoe, raha ireo solika nolaniana ireo izao no anampiana ny milina JIRAMA dia mety ampy andrehetana ora maromaro ny herin’aratra JIRAMA 😉
Dia miverina amin’ireto namako mpamaky ireto aho, mamaky am-pahanginana. Angamba tsy manana fahefa-mividy izay gazety akory fa izay sombiny azo vakiana ihany amin’izy mipetaka eo. Mbola faly indray aho raha mandao azy ireo, mahita fa tsy azo fahanan-dalitra avokoa ny vahoaka, fa misy hatrany ireo tia karokaroka ka tsy afa-pon’ny « vaovao an-tsary propagandy » [tsy izaho irery] raha tsy izany tsy mitady vaovao vao maraina toy izao … na dia atao aza hoe vaovao efa lany andro satria omaly.
Tsy fantatro izay ahatongavan’ny « fibre optique » na « backbone », izay navelako aoriana tany an-dalàna RN7 >>, any Fianarantsoa. Fa mino aho fa hanova zavatra be dia be izany, na dia ny famakiana vaovao ao amin’ny alàlan’ny aterineto fotsiny aza ary vao mainka moa raha misy fandraisana anjara fitenenana eto amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao ara-aterineto toy ny nataon’ny mponina any amin’ny tanànan’i Nata any Afrika >>, mba ahafahany mizara ny andavan’androny amin’na sehatra iraisam-pirenena … satria liam-baovao ny Malagasy !
[tohiny : Tsidi-pahitra an’i Talata-Ampano >>]
[nialoha : Fanamboarana ny « Backbone » any amin’ny RN7 >>]
Posté dans tsetsatsetsaTagué fianarantsoa, foto, gazety, journaux, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, panneau, photo, photographie, photographies, photography, photos, rn7, vaovaopar tomavana4 commentaires
4 réflexions sur “Liam-baovao ny Malagasy”
Ping: Fanamboarana ny « Backbone » any amin’ny RN7 « malagasy
19 octobre 2007 à 18:24
fony izahay nipetraka tany Dago dia mba anisan’ny mpamaky tahaka ireo olona an-tsary ireo ihany koa. tsy ny vola akory no tsy nisy satria tsy dia lafo ny gazety fa hafahafa be raha mividy gazety mihoatra ny anankiroa (midi sy lakroa t@ izany fotoana), dia eo @ mpivaro-gazety eo no manandrana mandrapaka filazam-baovao hafa. marina tokoa izany hoe « misy hatrany ireo tia karokaroka » « tsy azo fahanan-dalitra » saingy tsy azo lazaina hoe mpomba ny mpanohitra avy hatrany izy ireo 🙂
tokony hahalala isika be saina avy ao antananarivo na frantsa na soisa fa tsy izay fiheverantsika ihany akory no tomombona (ohatra hoe : tena demokrasia marina ve madagasikara ?) ka raha mitovy firehana amintsika ny olon-tsotra dia arahaba soa fa raha tsy izany kosa dia toroina hoe bado na mora voavidy na izatsy na izaroa.
tamin’ny fandalovako tany izao dia olona tany ambanivohitr’antananarivo sy olona faran’izay tsotra tany fenoarivo atsinanana no hitako tena nanana fijery malina (subtil hoy izahay vazaha) fa ny be saina (mihevitra azy ho mpanohitra matetika) reko tao antananarivo sady mankalilo no marivo fijery (araka ny fahenoiko azy) no indrindra… tsy mandeha mifidy !!! ka akory ataoko anao baba :-)))
Misaotra tamin’ny fijoroana vavolombelona 😉
>raha mitovy firehana amintsika ny olon-tsotra dia arahaba soa fa raha tsy izany kosa dia toroina hoe bado na mora voavidy na izatsy na izaroa
Tena fampahatrana ny haren’ny fahasamihafan’ny Malagasy tokoa raha ahena ho sokajim-pijery roa sisa no atao dia « izay miaraka aminay » sy « ireo hafa rehetra mpanohitra ny fandrosoam-pirenena » 😦
Asa raha ny fijeriko mpandalo ihany -ary ialana tsiny be dia be raha hitanareo ho somary be ny lohako fa io no mba fijeriko dia arosoko- nahatsapa aho tany fa tsy ny hevitra fotsiny no ampiadiana [adihevitra] fa tena ady.
Aiza rangahy koa, izy mivady no miady … dia hatramin’izay mba manana hevitra « tsy tena mifanandrify » amin’ny fitondrana dia avy hatrany dia omena ny anaram-bositra hoe « mpanohitra » 😯 torak’izany koa raha sendra nitovy ny hevitra dia « mpomba an’dRa8 ».
Fa misy mihevitra tokoa ve hoe tsy manana ny hazondamosiny Ra-Malagasy fa ondry manao bêê, bêê fotsiny ?
← Fanamboarana ny « Backbone » any amin’ny RN7
Sao mba misy fitaovana tsy ilainao intsony any ho any ? | CH-Madagascar →